Aston Villa Oo Arsenal Ku Garaacday Kubbad-Sameeyihii Bartilmaameedka U Ahaa – Garsoore Sports
Kooxda Kubbada-cagta ee Aston Villa ayaa aad ugu dhow inay la wareegto xiddig khad-dhexe ah oo Arsenal ay in muddo ah ku raadjoogtay.
Waa kubbadsameeyaha kooxda Norwich City Emi Buendia oo sida ay sheegayaan warar baahsan, qarka u saaran inuu ku biiro Aston Villa heshiis ku kacaya 35 milyan oo ginni, oo rikoor iibineyd u ah labada kooxba.
Buendia wuxuu umuuqday inuu u dhaqaaqayo Gunners muddooyinkii ugu dambeeyay, iyadoo xiddigan reer Argentina – oo dhowaan helay wicitaankiisii ugu horeeyay ee heer caalami uu doortay inuu xagaagan ka tago Carrow Road kaddib markii uu door weyn ka cayaaray in kooxda Norwich ay kusoo laabato horyaalka Premier League-ga.
Emi Buendia xiddig hal abuur leh oo awood u leh furfurista difaacyada waan mid ku wanaagsan tab marineedka kubbadaha halista ah.
Buendia waxaa loo magacaabay Cayaaryahanka Sannadka ee Championshipka Ingiriiska xilli-cayaareedkan.
Arsenal ayaa seegtay saxiixiisa balse waxaa lala xiriirinayay cayaaryahanno badan maadaama ay tahay inay buuxiyaan booska banaan ee khadka-dhexe ee weerarka, iyadoo Martin Odegaard iyo Dani Ceballos ay dib ugusoo laabteen Real Madrid kaddib amaahdii ay ku qaateen waqooyiga London.
Emile Smith-Rowe ayaa cayaari kara booskaas laakiin da’yarkan la iskuma haleyn karo waxaana ay markan tahay in Gunners ay suuqan xagaaga lasoo saxiixato kubbadsameeye qibrad leh.
Waa Maxay Rikoorada Uu Sameeyay Ruben Dias Kaddib Markii Loo Doortay Xiddiga Sannadka Ee Premier League-ga?